Google Kutsvaga Mapfupi uye Maparamende | Martech Zone
Nhasi, ndanga ndichitsvaga infographic pawebhusaiti yeAdobe uye mhedzisiro yacho yanga isiri izvo zvandaitsvaga. Panzvimbo pekuenda kune saiti ndobva ndatsvaga mukati, ini ndinowanzoshandisa nzira pfupi dzeGoogle kutsvaga saiti. Izvi zvinouya zvakanyanya kubatsira - kunyangwe ndiri kutsvaga chitaurwa, kodhi snippet, kana imwe faira faira.
Mune ino kesi, iyo yekutanga yekutsvaga yaive:
Mhedzisiro iyoyo inopa peji rega rega kune ese Adobe subdomains ayo anosanganisira izwi infographic. Izvo zvakaunza zviuru zvemapeji kubva kuAdobe's stock photo saiti saka ini ndaida kubvisa iyo subdomain kubva kumhedzisiro:
Ini ndakabvisa iyo chaiyo subdomain ndichishandisa iyo Minus kusaina neiyo subdomain ini yandaisanganisa. Zvino ini ndaida kutsvaga yakatarwa fayipi ... iyo png faira:
Aya ese mapfupiso anobatsira zvakanyanya kutsvaga mamwe masosi ... asi iwe ungazoshamiswa kuti ungakwanise sei kunongedza mibvunzo yako.
Maitiro Ekutsvaga Saiti Yakatarwa neGoogle
site: Kutsvaga mukati meimwe saiti kana duraini. -site: kusasanganisira dura kana subdomain
Nzira Yokutsvaga Nayo Social Media Platform NaGoogle
Shandisa iyo @ chiratidzo kuti utsvake pasocial media chikuva (ingova nechokwadi chekuisa yekudyidzana chikuva kumagumo).
Maitiro Ekutsvaga Yeakananga File Rudzi neGoogle
faira: Kutsvaga kune yakasarudzika mhando yefaira, senge pdf, doc, txt, mp3, png, gif. Unogona kusarudzira ne -filetype.
Maitiro Ekutsvaga Mune Chinyorwa NeGoogle
chishuwo: Kutsvaga kwezwi chairo mukati memusoro wewebhu peji pane iro peji rese. Unogona kusanganisa ne -intitle.
chirevo: Kutsvaga kweshoko chairo mukati memusoro weblog blog. Unogona kusarudzira ne -inposttitle.
allintitle: Tsvaga mutsara wese mukati memusoro. Unogona kusanganisa ne -allintitle.
Maitiro Ekutsvaga Mune A URL WIth Google
allinurl: Tsvaga mutsara wese mukati memazwi e URL. Unogona kusanganisa ne -allinurl.
inurl: Tsvaga mazwi mukati me URL. Unogona kusanganisa ne -inurl.
Maitiro Ekutsvaga Mune Anchor Chinyorwa WIth Google
allinanchor - tsvaga mutsara wese mukati mechinyorwa chinyorwa chemufananidzo. Unogona kusarudzira ne -allinanchor.
inanchor: Tsvaga izwi mukati mechinyorwa chinyorwa chemufananidzo. Unogona kusarudzira ne -inanchor.
Vashandisi veKutsvaga Chinyorwa NeGoogle
Shandisa * pakati pemazwi sekadhi yemusango kuti utarise zvese zvinosanganiswa.
Shandisa OR opareta pakati pemazwi kutsvaga chero izwi.
Shandisa iyo AND opareta pakati pemazwi kutsvaga mazwi ese.
Shandisa * sekadhi kadi kuti uwane mazwi ane mavara kana mazwi ari pakati
Shandisa iyo ~ pamberi peshoko rako kuti uwane mazwi akafanana. Mune ino kesi, mazwi seyunivhesiti achaonekwawo:
Sarudza mazwi ane chiratidzo chekubvisa
Tsvaga izwi chairo kana chirevo nekuzviisa mumakotesheni
Tsvaga mazwi ese mukati meimwe mhinduro. Unogona kusanganisa ne -seintextxt.
Tsvaga mazwi ese mukati meimwe mhinduro. Unogona kusanganisa ne -intext.
Tsvaga mazwi ari padhuze nepadhuze mukati meimwe nhamba yemazwi
Iwe unogona zvakare kuwedzera mamwe mabatanidzwa mukutsvaga kuti ubatanidze zvine mutsindo uye usasarure mazwi, zvirevo, madomeni, nezvimwe. Unogona zvakare kusasiya kushandisa chiratidzo chekubvisa mukutsvaga kwako.
Mhinduro Dzinokurumidza kuburikidza neGoogle Kutsvaga
Google inopawo mamwe mabasa anobatsira chaizvo:
Ranges yenhamba, mazuva, data, kana mitengo uchishandisa ..
Mamiriro ekunze: kutsvaka mamiriro okunze kuona mamiriro ekunze munzvimbo yako kana kuwedzera zita reguta.
Duramazwi: isa tsanangura pamberi peshoko chero ripi zvaro kuti uone tsananguro yaro.
Masvomhu: Pinda math equation senge 3 * 9123, kana gadzirisa yakaoma graphing equation inosanganisira +, -, *, /, uye trigonometry mazwi senge cos, sin, tan, arcsin. Chinhu chimwe chinobatsira neGoogle kuverenga ndechekuti iwe unogona kushandisa hombe manhamba… senge 3 trillion / 180 mamirioni uye uwane mhinduro chaiyo. Zvakareruka pane kupinda ese aya zero pane yako Calculator!
Percentage: Iwe unogona zvakare kuverenga muzana nekupinda% ye:
Shanduko yeyuniti: Pinda chero shanduko.
Mitambo: Tsvaga zita rechikwata chako kuti uone chirongwa, mutambo zvibodzwa uye zvimwe
Mamiriro Ekumhara: Isa nhamba yako yakazara yekubhururuka mukati uye uwane chinzvimbo chazvino
Mafirimu: Tsvaga zviri kutamba munharaunda
Kurumidza chokwadi: Tsvaga zita remukurumbira, nzvimbo, bhaisikopo, kana rwiyo kuti uwane ruzivo rwunoenderana
Tags: googlegoogle kuverenga muzanagoogle kuverengagoogle duramazwigoogle domain kutsvagagoogle inosanganisachinzvimbo chekubhururuka paGooglegoogle mafirimugoogle zvinokurumidza chokwadigoogle mazeragoogle searchgoogle search domainmapfupi ekutsvaga eGooglegoogle saiti yekutsvagagoogle mitambo yekutarisagoogle trigonometrygoogle unit shandukogoogle wildcard kutsvagazvinyorwa
yakanaka posvo - kunyorera kune rss izvozvi 🙂